EvoWorld.io 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
अघिल्लो खेल: सेलक्राफ्ट.यो
सेलक्राफ्ट.यो एउटा खेल जहाँ तपाईं अन्य खेलाडीहरू खान्नुहुन्छ र नखाईकन बाँच्नुहुन्छ। XP, s कमाउनुहोस् [...]
अर्को खेल: गिरावट मान्छे ..
Fall Guys Knockout के तपाईंलाई थाहा छ यस वर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय खेल के हो? यो सहि छ, यो Fall Guys Knockout fr [...]
EvoWorld.io सबैका लागि नयाँ र अनौंठो नि: शुल्क बाँच्ने खेल हो! यहाँ तपाईं एक सानो उडान रूपमा देखा पर्नेछ! नक्सा अन्वेषण गर्नुहोस् र यसलाई विकसित गर्नुहोस्! अनुभव प्राप्त गर्नका लागि नक्सामा फेला पार्न सक्ने खाद्य पदार्थहरू खाउनुहोस्! तपाईंले अन्य खेलाडीहरूसँग युद्ध गर्नुपर्दछ जुन तपाईं यो उत्कृष्ट नक्सामा फेला पार्न सक्नुहुन्छ! यो खेल अन्य .io खेलहरूको तुलनामा वास्तवमै अद्वितीय छ! यहाँ तपाईं मजा को धेरै घण्टा हुनेछ! आफ्नो दुश्मन संग प्रतिस्पर्धा! यदि तपाईं मर्नुभयो भने, तपाईं तिनीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ! यहाँ तपाईले धेरै बायोम र भूतल स्तरहरू भेट्टाउनुहुनेछ जस्तै खाली ठाउँ वा गुफाहरू! अन्त सम्म विकसित र राजा जो हुनुहुन्छ आफ्नो शत्रुहरु देखाउनुहोस्! त्यहाँ एक रैंकिंग प्रणाली पनि छ! यदि तपाईं पहिलो हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सकेसम्म धेरै अनुभव पोइहरू कमाउनु पर्छ! तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
# २ दिन# कार्य# html5# मल्टिप्लेयर# लोकप्रियपशुहरूबचाउनुहोस्विकासमुक्तमोबाइल